11 febroary-Zanaka zandary kamboty: manan-jo hanohy ny fianarany | Région Boeny
Raisin’ny zandarimariam-pirenena an-tànana ny fikarakarana ireo vady aman-janaka navelan’ireo zandary lavo tamin’ny fanatanterahana ny asany.
Nandritra ny fankalazana ny andron’ny 11 febroary ny sabotsy lasa teo, teny amin’ny Bord de la mer Mahajanga be, no nilazan’ny lehiben’ny Fari-piadidin’ny Zandarimariam-pirenena eto Mahajanga, ny Kly Mananga Jean Manasse izany.
Fotoam-pivavahana iraisam-pinoana narahina fitokanana tsangambato naorina eo amin’ny zaridainan’ny Bord de la mer no netin’ny zandary eto Mahajanga nanamarihana ny datin’ny 11 febroary izay natokan’izy ireo hahatsiarovana ny nahafatesan’ny Jly Richard Ratsimandrava ny taona 1975, ary hahatsiarovana ihany koa taty aoriana ireo zandary lavo amperin’asa.
Nampahafantarin’ny Kly Mananga Jean Manasse nandritra ny fitokanana fa misy ny fandraisana ireo zaza tsy ampy taona zanaka zandary lavo am-perin’asa ao amin’ny akanin’ny Zandary any Arivonimamo, Antananarivo mba hitaizana azy ireo araka ny zo hananany sy ahafahan’izy ireo ao aoriana mandray anjara amin’ny fifaninana hidirana ho mpianatra zandary ho an’izay efa ampy taona.
Anisan’ireo olo-manankaja sivily sy miaramila nanatrika ity lanonana tsotra fahatsiarovana ity ny Lehiben’ny Kabinetran’ny Faritra Boeny, Atoa Hemedy sy ny zanakavavin’ny Kly Jean Philippe, izay anarana entin’ny tobin’ny Zandarimariam-pirenena eto Mahajanga.